Yaa ku leh: Taajir xanaaqay ama Reer Soomaaliyeed oo ay ku kacday [video] | Somaliska
Raggaan waa labo nin oo ka mid ah kuwa ugu taajirsan wadanka ruushka. Ka dib dood kulul oo dhexmartay ayaa ninka lagu magacaabo Alexander Lebedev feer ku bilaabay dhigiisa Sergei Polonsky.
Ninka wax feeraya ayaa ku dooday in uu kala hormaray Polonsky oo isaga hanjabaad u soo jeediyay. Polonsky ayaa sheegay in uu jahwareersanyahay.
Halkaana waxaad ka aragtaan reer Soomaaliyeed oo la dagaalamaya nin cadaan ah. Sheekada ayaa ku bilaabatay ka dib markii labada nin ay ku murmeen goobta baabuurta la dhigto ka dibna haweeneydii ay iyada oo ul weyn wadata ku bilowday ninka cadaanka ah. KKKK
see camal dagaal lee soo galisay meesha naga dhaaf dagaal waan kadaalnaya , sxb ku dadaal kuwa fidowga ah .¨
Yaab iyo Amakaag badnaa Haweenta sideey wax ka Noqdeen waa iga Su\_aashe ??
kkkk waaloobaahan yahay mar mar wax yaabahan hadiidin sxb waalaqslayaa qoqosolkuna wax badan buu daawo uyahay qol cidla ah baaloobadan yahay svrg lama qoslo intabadan markaa waa loobahan yahay marmar sheekadan waad mahad san tahay jim caale sxb
kkkkkkkkkkkkkkkkk walahai wa sheko qosol leh waxay kutusaysa dhig inu wali kuharay inay isu hiliyan somalidu kkkkkkk fnny waxan filaya waa maraykan meshani qof gesiyada oo hilinaysa asagaba haysta kkkk dhiga kacay odaygedi oo dagal logu yimid oo ul lala dhacayo wa wixi dhiglow kaca wa sidii asaguba usan u egten xaskisoo dGl haysto
Somalidaa kuleh ban oran kara xararda odagalamayo kuwan wa qof qof ferkudhuftay kiklna usan kadaba tagin ee egayo somali hadu ahanlaha wakuboobilaha uu dadkani wanagadaganyihin
Walle waa yaab. Marka reerkii oo dhan macaa cunugii uu ninka cadaanka ah ka dkaadey maxaa talo ah oo ay sameeyeen? Bal reerka haloo gurmado.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk sida lobobsiye layabanahay kan kale ruusjaka kkkkkk waxaa igaga sii daran reerka somalida usha see usaartaylee ninka cadanka ah waa shactaro walobahanyahay waxaa no kale soogali mar walbo jimcaaale ilaqosol caadi ah waaye
waxa isku diray waa lagacta badan
hadii qaajo ahaayeen lahaayeen
reerka somlida waa in loo gurmadaa
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.wallahi wa yaab wax kasta wa arkeysa somalidu wa dad dagal isaga tagan aduunka in tartiib wax loxaliyo ma jirto dad cadi ah mahan walaal wadan kan lama dagalomo ee sikale aya wax lo xaliya somaliya aya dagal iyo is cayrsasho wax tarailahad marka taas wax ey ino cadayneysa in eynan weli daalin oo utaganahay dhib iyo qahar iyo dagal bal halaskidayo in wax la xaliyo tartiibna lodhamayo
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk somalida aya ku leh kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Walaalayaalow anniga waxay ila tahay iney ku leeyihiin nimanka Ruushka ee mid midkii kale feer miiska uga dejiyay. Reerka Soomaalida sheekada bilowgeeda markey aragtay Ninka odagaa oo xaalku ku xun yahay gabadhun iney ul la dhacdo waaba fiicneyda waxaan ciil ugu baqtiyay markii ayagoo 2ba qof oo waaweyna uu nin keliyi ushii ay wateenba farahooda ka bixiyay welibana uu madaxa kala dhacay ninkii gabadhu usoo hiiley oo isla ushii ay keentay lala dhacay. Wiilka yarkaa waa fariid maxaa yeeley aabihiis oo qoorsagaaro lagu hayo markuu arkay waxuu ka bixi waayay aabo aabo ileyn awood kale maba hayee. Ninka odagaana gabadhaaba dhaantey maxaa yeelay asagu isla markii la kala qabteyba waa kan gaariga iigu cararay Allow mar iga fujiyeey ka taagneyd kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
walahi gabar xayi ah bay aheed lakin dad soomaaliyeed oo u hiiliyaa meesha ka maqnaa
ala reerka dagaal ee galeen salamaad ilahay ha samata bixiyo gabar nin la dagalameeyso ii koow kkkk